वर्गरहित सिक्किम चामलिङ सत्ताले देखाएको झुठो सपना थियोे - खबरम्यागजिन
[ August 2, 2020 ] जिटिएको वार्ताको पत्र विनय तामाङलाई आउने वित्तिकै विमल खेमा किन रातारात ‘गोर्खाल्याण्डपन्थी’ बने? मुख्य समाचार
[ August 1, 2020 ] शब्द र संवेदन मुख्य समाचार
[ July 28, 2020 ] गठबन्धन कन्फ्युजन, विमल स्टन्ट र कुभिण्डोहरू मुख्य समाचार
[ July 25, 2020 ] कविता : फुर्छ कि रच्छ? मुख्य समाचार
[ July 23, 2020 ] BLACK & WHITE (TALK SHOW) WITH MANOJ BOGATI : पिपिएस र जनजातिको मुद्दा : कति प्रोपोगान्डा कति वास्तविकता? मुख्य समाचार
Homeम्यागजिनवर्गरहित सिक्किम चामलिङ सत्ताले देखाएको झुठो सपना थियोे
वर्गरहित सिक्किम चामलिङ सत्ताले देखाएको झुठो सपना थियोे
May 28, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि म्यागजिन 0
जुन समय सिक्किममा पुँजीवादले प्रवेश गऱ्यो उ आफ्नो साम्राज्यवादी चरित्रको थियो। यसलाई मलजल गर्ने राजनैतिक दल थियो चामलिङको नेतृत्वमा भएको सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा। चामलिङसँग भएका एक बौद्धिक तप्का थिए जसले मार्क्सवादी साहित्य पढ्थे र लेख्थे। उनीहरूले पुँजीवादको हरेक चरित्रलाई राम्ररी बुझेका थिए। जनतालाई झुक्याउनको निम्ति उनीहरूसँग जनवादी शब्दहरू प्रशस्तै थिए। चामलिङ र उनका नजिकका साहित्यकारहरू वर्गीय दृष्टिकोणमा साहित्य-आख्यान सिर्जना गरिरहेका थिए। र अर्को एउटा बौद्धिक तप्का थियो जसले वर्गीय दृष्टिकोण राख्थे तर उनीहरूलाई बाध्यताले बाँधेर राखेको थियो। उनीहरू पनि लगातार लेखिरहेका थिए र अहिलेसम्म लेखिरहेका छन्। तर खुलेर लेख्न भने उनीहरूलाई मुस्किल पऱ्यो।
सदाम, दक्षिण सिक्किम
१९-को चुनाव र चामलिङको हार
२०१९ को चुनाव सकियो। पवन कुमार चामलिङको नेतृत्वमा पच्चिस वर्षदेखि सिक्किममा सत्तासिन सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चाको सरकार ढल्यो। धेरैको निम्ति यो पत्याउनै नसक्ने कुरा थियो भने धेरैले चामलिङको हार अगावै देखिसकेका थिए। तर चामलिङ आफैं भने निकै ‘कन्फिडेन्ट’ थिए र चुनावी जनसभातिर भन्थे, ‘यसपटक भने सिक्किमको राजनैतिक इतिहासबाट विपक्षीको नामोनिसान मेटाइदिन्छौँ।’ तर भयो अर्कै। नामोनिसान कसैको मेटिएन उल्टा उनकै सरकार ढल्यो।
चामलिङको यति बलियो सत्ता कसरी ढल्यो त? के कस्ता कारणहरू थिए जसले गर्दा राज्यका जनता गोलेको नेतृत्वमा रहेको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चातिर होमिए?
वास्तवमा नब्बेको दशकतिर चामलिङ जुन प्रजातन्त्रको कुरा गर्थे, जुन ‘जनता राजमा जनतै राजा’को नारा दिन्थे त्यो २०१० सालतिर आइपुग्दा पूर्णरूपमा हराइसकेको थियो। यही कारण थियो कि एउटा ठूलो जमात प्रजातान्त्रिक हक अधिकारबाट वञ्चित थिए र गाउँ घरमा रहेका केही सामन्ती तप्काको पैतालामुनि दब्बिएर बस्नुपरिरहेको थियो। भण्डारीले विपक्षमा हुँदा त्यो जमातलाई राम्रोसँग नेतृत्व दिन सकेनन्। ती थिच्चिएका र दब्बिएका जमात, सास फेर्नको निम्ति छट्पट्टाइरहेका थिए। ठीक त्यसै समय गोले त्यो जमातको काँधमा काँध मिलाउन निस्किए।
२०१४-को चुनाव आयो। चामलिङ पुनः सत्तामा आए। विपक्षीका केही निर्वाचित नेताहरू रातारात चामलिङको छातामुनि ओतिन पुगे। जनतालाई विपक्षीबाट भरोसा हरायो। गोलेलाई जेल लगाइयो। गोले जब जेल पसे सिक्किममा अब विपक्षी हरायो भनेर सबैले सोचे। साँच्चै त्यससमय राज्यमा विपक्षीको छिटा कतै देखिन्नथ्यो। चर्चामा कमै देखिन थाले विपक्षीहरू।
गाउँघरमा चामलिङको फोटो भएको झण्डा मात्रै देखिन थाले। तर त्यस्तो समयमा पनि क्रान्तिकारी मोर्चाका दुई नेता भने लगातार बोलिरहेका थिए। उनीहरू लगातार गाउँ पस्ने काम गरिरहेका थिए। जब गोले जेलबाट निस्किए त्यसपटक भने चामलिङले गोलेलाई चिन्न सकेनन्। सायदै क्रान्तिकारी मोर्चाका ती दुई नेताले गाउँ र बस्तीतिर जनतामाझ गरिरहेका कामलाई चामलिङले हल्कारुपमा लिएका थिए। तर गोले जेलबाट निस्किएपछि क्रान्तिकारी मोर्चाले आफ्नो तीव्रता बढायो। सिक्किमको राजनैतिक इतिहासमा सरकारी नोकरीमा भएका कर्मचारीसमेत राजनैतिक हक र अधिकारको निम्ति खुलेर बोलेको पहिलोपटक छर्लङ्ग देखियो।
चामलिङको वर्गरहित सिक्किम
चामलिङ भन्थे, ‘हामी सिक्किमलाई वर्गरिहत बनाउने दर्शन बोकेर हिडेका छौँ।’ तर त्यो भाषण मात्रै थियो। वास्तवमा उनीहरूको बाटो समाजवादतिर कदापि थिएन।
राज्यलाई औद्योगिकरण गर्न अघि उनी यस्तो भाषण हाँक्थे। उनी भन्थे, ‘हाम्रो शत्रु भनेको वर्ग शत्रु मात्रै हो।’ भण्डारीको विरोध गर्दा उनले प्रजातान्त्रको भाषण गर्थे र मार्क्सवादी शब्दकोष प्रयोग गर्थे। कविता लेख्थे ‘मेरो त जातै मान्छे।’
‘समस्याका ठूला-ठूला चक्काहरू
सीमानाका युद्धभूमिहरूमा भन्दा
यी गाउँ-घरका झोपडीहरूमा
डरलाग्दा युद्धहरू छेडिएका छन्’
यसरी लेख्ने चामलिङकै दुई दशक भन्दा लामो शासनकालमा छुट्टियो गान्तोक शहर र कर्जी गाउँबीच ठूलो खाडल। हजारौं युवाहरू पढाइ छोडेर ‘एक परिवार एक नोकरी’ अन्तर्गत अस्थायी रुपमा भिलेज गार्डको काम गर्न बाध्य बने भने अर्कोतिर एक मुठी युवाहरू जो हार्डबर्ड र केमब्रिज पढिरहेका छन्। यस्ता दुईवटा जमातबीच ठूलो वर्गरेखा कोरियो उनकै लामो शासनकालमा।
‘भुँडी-दौडमामा नब्बे हारेर
दशको जित्ने पालो छ,
र दस अपच भएर यहाँ
नब्बे भुँडी खाली छ।’
उनैको लामो शासनकालमा नब्बे भुँडीले पेटभरि खान पाएनन्। नब्बे आँखाले सपना पनि आरक्षणको आधारमा देख्न बाध्य भए। नब्बे दिमागले सचेतनाको पाठ पढ्न पाएनन्। सुने त केवल बिपिएल चामल बाँडेको भाषण। र दस खुट्टाहरू भने राज्यलाई चुसेर बाहिरसम्म लम्किन सफल भइसकेका थिए।
तर सिक्किमको वास्तविक इमेज गान्तोकमा बसेका पत्रकारहरूले लेखेका समाचारमा कहाँ देखिन्थ्यो र। केही पत्रकारहरू आँट गरेर सिक्किम देखाउन गाउँ पस्थे र रिपोर्ट लेख्थे। तर उनीहरूको पेटमा ताला लाग्न शुरु हुन्थ्यो। कतिजना पत्रकारहरूमाथि भौतिक हमलासम्म भयो। सचेत तप्काकाहरू कि उनको पक्षमा बोल्थे कि बोल्न छोड्थे। भयको साङ्लोमा बाँधिएर बसेका थिए जनता। प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक चरित्र र सचेतना यहाँसम्म निर्माण भयो कि कलेज लेभलका विद्यार्थीहरूलाई प्रश्न सोध्दा भन्छन् ‘राज्य दिवस भनेको एसडीएफ सरकार गठन भएको दिन हो।’
हजारौं सरकारी कर्मचारीहरू भिक्टिमाइज भए। हामी छरछिमेकतिर देख्थ्यौं चुनाव पछाडि विपक्षमा बोल्नेहरू कुम्लो कसेर सुदुर पश्चिम र उत्तरतिरका दुर्गम क्षेत्रतिर सरुवा हुन्थे।
चामलिङको लामो शासनकालमा धेरै जनावाजहरू दबिए। धेरै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरू गर्भमै हराए।
जस्तो सन् २०००-को दशक लाग्यो राज्यलाई औद्योगिकरण गर्नको निम्ति सरकारले कदम चलायो। हजारौं निजी कम्पनीहरू भित्रिए। यहाँको प्राकृतिक सम्पदाको बलात्कार भयो। टिस्टामा बाँध लाग्ने भयो। सरकार र कम्पनीबीच सम्झौता भइसकेको थियो। चाहिएकोभन्दा अत्यन्तै धेरै प्राकृतिक विनाश हुने स्पष्ट थियो। राज्यभरिका विद्यार्थीहरू र सानातिना सङ्गठनहरू त्यस समय एन्टी-ड्याम अभियानमा निस्किए।
आन्दोलन गर्ने योजना बनाए। राज्य बन्द गर्ने योजना थियो विद्यार्थीहरूको। तर रातारात त्यो आन्दोलन गर्भमै दबियो। कसरी दबियो र कसले दबायो त्यस समय ठिम्याउनसम्म गाह्रो भयो। र टिस्टामा बाँध लाग्यो र अहिले उ गम्भीर बिमार भएको छ।
तर बोल्न सक्थेनन् कोही। गान्तोकमा कोही बोल्थे र हराउँथे। गाउँमा बोल्नेहरू सामन्ति चरित्रका क्याडरहरूको शिकार बन्थे। लेखकहरू एकदमै जोगिएर लेख्थे। नब्बेको दशकमा लेख्नेहरू कत्तिजना नेपाल पसेका थिए। वास्तवमा फ्लाइओभरमुनि भिखारी भेटिँदैनन् सिक्किममा। तर प्रजातान्त्रिक चरित्रको खडेरी चलाइदिएको छ सत्ताले। स्कुलको पाठ्यक्रममा राज्यको राजनैतिक इतिहास छैन। स्टेट बोर्ड नै छैन। गान्तोकमा हुने राजनीतिले गाउँलेको मस्तिष्कलाई असर नै पार्दैन। यसैको आडमा चामलिङ बस्थे। नत्र सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि उनी जति प्रजातान्त्रिक हक अधिकारको भाषण गर्थे त्यो विगत पच्चिस वर्षमा कहाँ हराएको थियो?
अनि विस्तारै दर्जनौं निजी कम्पनीहरू भित्रियो राज्यमा। नोकरी दिने नाममा राज्यको अनेकौं युवाहरूको मजदुरीको शोषण गर्न आएका थिए उनीहरू। भित्र्याइएको थियो उनीहरूलाई।
१४-को विद्यार्थी प्रदर्शनी
सन् २०१४। सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा सेक्युर फिल गर्दै सत्तामा गज्जक भएर बसेको थियो। निजी स्कुल, कलेज र युनिभर्सिटीहरू राज्यमा तीव्रताका साथ बढ्दै थियो। शैक्षिक क्षेत्रमा निजीकरण बढिरहेको थियो। चुनाव अगाडि मुफ्त शिक्षाको विज्ञापन गरेको सत्ताले विद्यार्थीहरूको फिस तीव्र रुपमा बढायो। विद्यार्थीहरू सडकमा आए। प्रशासन खनाइयो। विद्यार्थीलाई पुलिस बल लगाएर थिचियो। अनेकौं विद्यार्थीहरू अस्पतालमा भर्ना भए।
प्रजातान्त्रिक मुल्यको निम्ति आन्दोलन
यसरी २०१९ लाग्दा लाग्दै राज्यमा सानो ठूलो निकै आन्दोलनहरू निस्किए। अघिल्लो वर्ष नै सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमले गेजिङमा तीव्र प्रदर्शनी गरिसकेको थियो। राज्यमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरणले आकाश छोइसेको थियो। उनी फेरि निस्कियो गान्तोक चलो आन्दोलन। वास्तवमा गान्तोक चलो आन्दोलनले निकै ठूलो उथलपुथल पाऱ्यो। स्वास्थ्य सुविधाको मागमा निस्किएको यस आन्दोलनले तमाम सिक्किमे आम जनताको मनबाट राजनैतिक डर र भयलाई निकालेर फ्याँक्न सफल भयो। १० दिनसम्म आन्दोलन गरेर रित्तै हात लिएर फर्किएका युवाहरूले एउटा ठूलो फल लिएर फर्किएका थिए।
-त्यो थियो प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक मुल्यको प्रचार र विकास। जस्तो तरिकाले सत्ताले यो आन्दोलनलाई दबाउँदै थियो जनताको अगाडि भण्डाफोर हुँदै थियो उनीहरूको निरङ्कुशता।
गान्तोक चलोको लगत्तै पछाडि निस्कियो अस्थायी शिक्षकहरूको आन्दोलन। स्कुल छोडेर शिक्षकहरू सडकमा उत्रिए। यो आन्दोलन यति तीव्र थियो कि यसलाई नेतृत्व गरिरहेका शिक्षकहरूलाई प्रशासनले थुनुवासम्म गऱ्यो। तर यतिबेलासम्म धेरै जनताको मनमा राजनैतिक चेतनाको विकास भइसकेको थियो। भोलिपल्ट जनताको भीडले जेल घेराउ गरेरै निकाले ती शिक्षकहरूलाई। यसले सरकारी कर्मचारीहरूलाई आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति बोल्न प्रेरित गऱ्यो र उनीहरूको मनबाट डर र त्रासलाई निकालेर फ्याँक्न सफल भयो।
मजदुर आन्दोलन र नाङ्गो पुँजीवाद
सिक्किममा हजारौं निजी कारखानाहरू निर्माण भएपछि यहाँ हजारौं मजदुरहरू भए। तर उनीहरूको पक्षको हक र अधिकार अगावै खोसिएको थियो। कुनै कानुन उनीहरूको पक्षमा थिएन्। जब केही मजदुरहरू कम्पनी म्यानेज्मेन्टको अमानवीय हर्कतको विरुद्धमा सडकमा निस्किए त्यस समय मात्रै छर्लङ्ग भयो हकिकत। उनीहरूको कुनै हक अधिकार नै थिएन। यहाँसम्म कि ट्रेड युनियन एक्टसम्म खोसिएको थियो र खोसिएको छ।
एक महिना श्रम भवन अगाडि बसेर मजदुरहरूले आफ्नो हक र अधिकार मागिरहे। तर त्यस समय नाङ्गो पुँजीवादलाई राज्यले देख्यो। कम्पनी अगाडि सरकार लाचार थियो। एक महिनापछि ती मजदुरहरू खाली हात फर्किए। श्रमिकहरूले श्रम मन्त्रीको अनुहारसम्म देखेनन्।
यी जम्मै आन्दोलनहरूले अदृश्य रुपमा सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई ढल्नमा ठूलो सहयोग गरेको थियो। तर सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष फ्याक्टर भने यसपटक जातीय मुद्दाहरू देखिए। तर ती देखिएका मुद्दाहरू थिए भने आन्दोलनहरूले जनतामा पारेको प्रभाव भित्री कारणहरू थिए।
अहिले जनताहरू नेताहरूसँग विस्तारै डराउन छाड्दैछन्। यहाँ सामन्ती चरित्र विस्तारै मर्दैछ र प्रजातान्त्रिक चरित्र बिस्तारै उम्रिँदैछ।
सिक्किम र पुँजीवाद
यसरी भारतीय पुँजीवादको दलाली गरिरह्यो चामलिङ सत्ताले। किताब, भाषण, कविता, उपन्यास र नारामा जनवादी कुरा र जीवन, चरित्र अनि व्यवहारमा जनविरोधी कदम। यही चाल थियो चामलिङ सत्ताको। आफैंलाई पर्यावरणको रक्षक मान्ने चामलिङ जसले ‘टेन मिनेट्स टु अर्त’ जस्ता योजनाहरू बनाउँछन् उनैको समयमा टिस्टा रङ्गीतको त्यस्तो हालत हुन्छ।
चामलिङ सरकार ढल्यो अब के हुन्छ त? के अब जनताको सपना पूरा हुन्छन् त। के चामलिङले बनाउन नसकेको वर्गरहित समाज अब निर्माण हुन्छ त? जनताको कामहरू हुन्छन् त? यी सब हुन्छन् भनेर सोच्नु हाम्रो भ्रम बाहेक अरु केही पनि हुनेछैन।
हो केही फरक केही समयको निम्ति अवश्य हुनेछ। लेखकहरू केही समय खुलेर लेख्ने छन्। पत्रकारहरू खुलेर पत्रकारिता गर्नेछन्। नयाँ सरकारले केही फिल्मी कदमहरू चाल्ने छन्। त्यसपछि उ पनि यहाँका साथै राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको दलाल बन्नेछन्। कति अगावै बनिसके। अब चाहेनन् भने पनि बाध्यतावश बन्न नै पर्नेछ। कारण यो व्यवस्था जनताले होइन पुँजीपतिहरूले चलाउँछन्। तर हामीलाई स्पष्ट थाहा छ कि, को को के के-का निम्ति राजनैतिक मैदानमा उत्रिएका हुन्।
चुनावको नतिजा लगत्तै पछाडि अनेकौं हिंसाका खबरहरू आए। दङ्गाफसाद भएको पनि देखियो। बदलाको भावना बोकेर तीव्ररुपमा राजनीति हुँदैछ। यसमा दुःख पाउने भनेको आम जनताले हो। साधारणवर्गले हो। यसैले साधारणवर्गले यति कुरा बुझ्नुपर्छ कि यो व्यवस्थाभित्र उनीहरूको सपना पूरा हुनेवाला छैन। सर्वहारावर्गले मुक्ति पाउनेवाला छैनन्। समाजमा रहेको वर्ग विभाजन मेटिनेवाला छैन। यसैले आम जनताको मुक्तिको बाटो भनेको सर्वहारा क्रान्तिको बाटो हो चुनावी बाटो होइन। यसको प्रथम कदम भनेको आफूमा प्रजातान्त्रिक चेतना र गणतान्त्रिक चरित्र निर्माणको निम्ति सङ्घर्ष गर्नु हो।
‘विनय तामाङहरूले जनाधारलाई सम्मान नगरेर आफूहरू कति अगणतान्त्रिक हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरिरहेका छन्’
जिटिएको वार्ताको पत्र विनय तामाङलाई आउने वित्तिकै विमल खेमा किन रातारात ‘गोर्खाल्याण्डपन्थी’ बने? August 2, 2020
शब्द र संवेदन August 1, 2020
गठबन्धन कन्फ्युजन, विमल स्टन्ट र कुभिण्डोहरू July 28, 2020
कविता : फुर्छ कि रच्छ? July 25, 2020
BLACK & WHITE (TALK SHOW) WITH MANOJ BOGATI : पिपिएस र जनजातिको मुद्दा : कति प्रोपोगान्डा कति वास्तविकता? July 23, 2020
के अनित र विनय मात्र दोषी हुन्? July 23, 2020
सर्वसत्तावादीको प्रतिरोधमा पालन गर्नु पर्ने ६ बुँदे नियम July 21, 2020
चियापत्ती पेल्ने मेसिनले मान्छे पेलेपछि July 21, 2020
विवादित नेताका सचेत जनता : न्युजभ्युज भिडियो July 21, 2020
फासीवादको घातक सङ्केतलाई लिएर किन चिन्ता गर्नु आवश्यक छ? July 19, 2020
झाऱ्यो सेनाः सीआरपीको छापामारी जारीः सिंहमारीमा फाइरिङ-फेरि एकको मृत्युः जम्मा तीनको मृत्यु (37,150)
दार्जीलिङमा फेरि भड्कियो हिंसाः गोलीबारीमा एक पुलिस अधिकारीको मृत्युःजारी छ गोलीबारी (33,642)
विमल गुरूङले आज अचानक खुलासा गर्दै भने-दिल्लीले बोलाउँदैछ, गोर्खाल्यान्डको लागि हो भने मात्रै जान्छुः गुरूङ उत्रिए सांसदको राजिनामा मागको विपक्षमा (30,891)
मोर्चाले केन्द्रलाई दियो अल्टिमेटमः भन्यो- 8 अगस्त6बजीभित्र केन्द्रले वार्ता बोलाएन भने9अगस्तदेखि आन्दोलन कठोर गर्नेछौँ (29,463)
अनिश्चितकालीन बन्द जारीः ‘हामी यो पाली पनि चुक्यौं भने एक चम्ची पानीमा डुबेर मर्दा हुन्छ’- विनय तामाङ (25,984)
विमल गुरूङले भने, ‘तयारी बस्नु, म आउँदैछु’ : विमलको स्वागतमा लाखौं जनता सडक उत्रने (23,182)
बङ्गालको विरोधमा उत्रियो मिजोरम (22,081)
पिसाबमा रगत बग्न थाल्यो, तरै पनि अनशनकारीहरू भन्छन्, दबाई होइन गोर्खाल्याण्ड चाहिन्छ (21,334)
वरूण मृत्यु मामिलामा धेरैवटा सनसनीपूर्ण खुलासा: “मोर्चाको अर्को गुटले भनेको थियो, ‘तेरो दाजुलाई जेलबाट निकाल्नु छ भने हाम्रो गुटमा आइज, तर हामीले सम्झौता गरेनौँ’ (20,767)
केन्द्रिय गृहमन्त्रीको निम्तोः गोजमुमो-जीएमसीसी टोलीको दिल्ली प्रस्थान (20,541)
आज जे भयो, त्यसको दण्ड विनय र अनितले हन्ड्रेट टेन पर्सेन्ट पाउनेछन्, गोर्खाल्याण्ड माग्ने कोही छैन भन्ने देखाउन कुटपिट गरिएको हो- विमल गुरूङ (20,150)
टिस्टा भेल्लीमा चार पुलिस कर्मी घाइतेः बतायो पुलिस र स्थानीयले बेग्लाबेग्लै कथा (19,330)
बनियो राष्ट्रीय गोर्खाल्याण्ड समितिः अबको आन्दोलन बौद्धिक नेतृत्वले गर्नेछ-मुनिष तामाङ (19,286)
पवारले दिए गृहमन्त्रीलाई त्रिपक्षीय वार्ताको दबाउ: केन्द्रले चाँड़ै वार्ताको प्रस्ताव दिनेछ: राजनाथ (19,162)
गिरी टोली दिल्लीमाः मोर्चाको कार्यनीतिमा फेरबदलः केन्द्रले देशको सुरक्षाको हवाला दिएर मोर्चालाई सम्झौतामा ल्याउन सक्ने सूत्रको शङ्का (18,802)
बन्द खोल्ने नखोल्नेबारे निर्णय गर्ने दायित्व मोर्चाको हो- विमल गुरूङ (18,682)